त्यो बेलाको लखनऊ चंगा : सत्यमोहन जोशी- दसैं विशेष - कान्तिपुर समाचार
त्यो बेलाको लखनऊ चंगा : सत्यमोहन जोशी
त्यसबेला तीनै सहरमा राजा बुढानिलकण्ठमा चंगा उडाउन गए रे भनेर चर्चा चल्थ्यो । राष्ट्रपिता श्री ५ त्रिभुवन आफ्ना तीन छोराहरूलाई लिएर बुढानिलकण्ठमा चंगा उडाउन जान्थे । राजा त्रिभुवन चंगाका सौखिन थिए ।
आश्विन २८, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — २००७ सालसम्म काठमाठौँ ‘फर्विडेन सिटी’ थियो । अर्थात् बाहिरका मान्छे पनि विरलै आउँथे । र, यहाँका मानिस पनि विरलै बाहिरफेर जान्थे । त्यसैले त्यसबेलासम्म यो तीन सहर ‘फर्विडेन सिटी’ थियो ।
विदेशको त कुरै छाडौँ, हाम्रै मधेसबाट कोही काठमाडौँ आउनुपर्‍यो भने पनि चिसापानी गढीमा राहदानी देखाएरमात्र आउन पाउँथे । बाहिरी दुनियाँसित नेपालीको सम्बन्ध र सम्पर्क निकै खुम्चिएको थियो ।
तर अहिलेचाहिँ त्यो अवस्था छैन । यहाँका मानिसहरू संसारका कुनाकाप्चासम्म पुगेका छन् । संसारको जुन कुनै कुनामा गए पनि नेपाली अनुहार भेटिन्छन् । र, विदेशीहरू पनि यहाँ धेरै आउजाउ गर्छन् ।
यातायातको द्रूत विकास, रेडियो, टिभीको प्रवेश र सूचना प्रविधिको विकासले पूरै विश्वलाई साँघुर्‍याएको छ । मोबाइलको आविष्कारले त घुम्ने, लेख्ने, पढ्ने, फोटो खिच्ने सबै कुरामा निकै परिवर्तन ल्याएको छ । यसबाट हामी अलग हुनसक्ने अवस्था छैन । काठमाडौँको रहनसहन, लवाइ–खवाइ, जात्रा, पर्व, संस्कार, संस्कृतिमा पनि विश्वव्यापी खुलापनको प्रभाव परेको छ ।
यो खुलापनसँगै आयातीत संस्कृति पनि आयो । संस्कार, संस्कृति, जात्रा र पर्वहरूमा पनि नयाँ परिवर्तन आएको छ । यसलाई रोकेर रोक्न सकिँदैन । समयले नै ल्लाएको परिवर्तन हो यो । तर, दुःखको कुरा के भने युनेस्कोको सम्मेलनका अनुसार देखिने (ट्यान्जिवल) र नदेखिने (इन्ट्यिान्जिबल) संस्कृतिलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा आएको छ । ‘ट्यान्जिबल’ भन्नाले मन्दिरलगायत भौतिक पूर्वाधार भन्ने बुझ्न सकिन्छ भने ‘इन्ट्यिान्जिबल’ भन्नाले मौलिक सम्पदा भन्ने बुझिन्छ । यसलाई चोरेर लैजाने गरेको कुरा सुन्दा ज्यादै दुःख लाग्छ ।
कुनै पनि मुलुकको संस्कृतिसम्बन्धी नीतिले त्यसको सुरक्षामा जोड दिएको हुन्छ । नेपालको पनि सांस्कृतिक नीति (कल्चरल पोलिसी) छ । नेपालले ‘कल्चरल पोलिसी’ पनि बनायो, त्यसको बचाऊ गर्नुपर्छ पनि भनेको छ । तर दक्ष जनशक्तिको अभावमा यो नीति कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । कागजी सांस्कृतिक नीतिमात्र भएर हुँदैन । यसका लागि मन्त्रालय, विभाग र बजेट सबैकुरा चाहिन्छ ।
म सानो छँदा उपत्यका एउटा ‘फर्विडेन सिटी’ थियो । बाहिरी दुनियाँको यहाँ कुनै प्रवेश र प्रभाव थिएन । पहिलेदेखि चल्दै आएको परम्परामा सबै बाँधिएका हुन्थे । त्यसमध्ये मुख्य आकर्षकचाहिँ खड्गजात्रा हुन्थ्यो । इन्द्रजात्रादेखि विभिन्न प्रकारका रमझम शुरू हुन्छ । हमी केटाकेटी छँदा सरकारले एक रूपैयाँ हो कि पचास पैसा ‘कल्चरल ट्याक्स’ पनि लिन्थ्यो ।
बसन्तपुरस्थित हनुमानढोका दरबारमा श्रीपञ्चमीमा वसन्त श्रवण हुन्थ्यो । राष्ट्रप्रमुखका रूपमा श्री ५ महाराजाधिराज वसन्त श्रवण गर्न हनुमानढोका जाने चलन थियो । त्यसपछि दसैँका बेला शारदीय गीतहरू सुनाउने चलन थियो ।
काठमाडौँका नेवार समुदायमा दसैँ आयो कि त्यो तलेजुसित सम्बन्धित भइहाल्छ । गाउँघरमा पनि तलेजुजस्तै ‘मिनी तलेजु’ निर्माण गरिन्थ्यो । शक्तिपीठहरुमा मानिसहरूको भीड लाग्थ्यो । अहिले पनि शक्तिपीठहरूमा मानिसहरूको भीड लाग्छ । सिंहदरबार अगाडिको भद्रकाली मन्दिर पनि एउटा शक्ति पीठ नै हो । त्यसबेला भद्रकाली मन्दिर मुख्य सहरभन्दा बाहिर थियो । शाक्त सम्प्रदायले देवीहरूको शक्तिको पुजाआराधना गर्छन् । त्यसबेला पनि गर्थे ।
मालश्री राग गाउने गरिन्थ्यो । अहिलेको कागेश्वरीमा ठूलो मेला लाग्थ्यो । ऋतुपरक गीतहरू गाउने चलन थियो । वर्षा ऋतुका गीतहरूलाई छाडेर शरद् ऋतुका गीतहरू गाउन थालेपछि दसैँ आएको बुझ्न सकिन्थ्यो । मालश्री धुन बज्न थाले सँगै दसैँको प्रवेश हुन्थ्यो । देवीका थानहरूमा धुमधामले पुजाआज हुन्थ्यो । चंगा उडाइन्थ्यो ।
केटाकेटी छँदा दसैँमा चंगा उडाउँथेँ । कौसी हुनेहरू कौसीमा गएर चंगा उडाउँथे, नहुनेहरू टोल टोलमा गएर जहाँ जहाँ चउर छ, खुला ठाउँ छ त्यहीँ गएर उडाउँथे । चंगा उडाउने, जात्रा जाने, यताउति हिँड्ने गरेर दसैँ मनाइन्थ्यो ।
चंगा बनाउने प्रविधि र आकार त लगभग उही नै हो । तर त्यो बेला लखनऊ चंगाचाहिँ नामी मानिन्थ्यो । सायद् लखनऊबाट ल्याएको भएर त्यसको नामै लखनऊ रहेको हो कि ! एउटै रङको हुन्थ्यो त्यो चंगा । उडाउँदा आवाज आउँथ्यो । उडाउँदाखेरी सरर्र, हरर्र आवाज आउँथ्यो । ‘थ्रेडिङ भ्वइस’ सिर्जना गर्थ्यो । लखनऊ चंगा उडाउँदा बडो मज्जा आउँथ्यो ।
हाम्रो यहाँको स्थानीय चंगाचाहिँ दुईवटा आँखा भएको हुन्थ्यो । आँखे चंगा पनि निकै चल्तीमा थियो त्यसबेला । त्यो चाहिँ हाम्रो यहीँको चंगा हो । त्यस्तै धर्के, दाह्रीवाल, स्वाडा आदि किसिम किसिमका चंगा हुन्थे । यी सबैमा नामीचाहिँ लखनऊ चंगा नै थियो ।
त्यसबेला तीनै सहरमा राजा बुढानिलकण्ठमा चंगा उडाउन गए रे भनी चर्चा चल्थ्यो । राष्ट्रपित श्री ५ त्रिभुवन आफ्ना तीन छोराहरू (महेन्द्र, हिमालय, बसुन्धरा) लाई लिएर बुढानिलकण्ठमा चंगा उडाउन जान्थे । राजा त्रिभुवन चंगाका सौखिन थिए । राणा शासनमा दरबारभित्रै कति बस्ने ? बुढानिलकण्ठको खुला फाँटमा चंगा उडाउन राजा गएको कुरा सर्वत्र हल्ला फैलन्थ्यो । दसैँको बेला त्यहाँ ठूलो मेला पनि लाग्छ ।
चंगा लडाउने धुन निकै हुन्थ्यो । एकजनाले अर्काको चंगा काट्ने भन्यो, आकाशतिरै आँखा लगायो, दौड्यो, हा..हा..हु..हु गर्‍यो । त्यसबेलाको मज्जै अर्को हुन्थ्यो । जीतबाजीको कुरा पनि आउँथ्यो । त्यो मनोरञ्जन मात्रै होइन कि ‘आर्ट अफ काइट फ्लाइङ’ नै हुन्थ्यो । लट्टाइँ कसरी घुमाउने, आकाशमा चंगा कसरी भिडाउने, कसरी काट्ने, कसरी नियन्त्रणमा लिने आदि कला आवश्यक हुन्छ चंगा उडाउँदा । न भोक न प्यास । दसैँ लाग्यो कि जात्रा र चंगाको रन्को छुट्थ्यो ।
प्रस्तुतिः ध्रुव सिम्खडा
प्रकाशित : आश्विन २८, २०७८ १९:२३
काँकडभिट्टा — साठीको दशकतिर केही युवा जमातको एउटा क्लोज सर्कल बन्यो, सीमान्त सहरमा । लेख्ने/पढ्ने रुची भएका युवाहरुको यो समूह पछि रिडर्स झापा बन्यो । लेखक उज्ज्वल प्रसाईंलगायतका युवाले समूहको अगुवाई गरे । अगुवामध्ये थिए, पत्रकार सन्तोष आचार्य ।
करिब डेढ दशकअघि रिडर्स झापाले निरन्तर रुपमा साप्ताहिक अन्तरक्रिया र छलफल आयोजना गर्थ्यो । त्यसै दौरान पत्रकार आचार्यले छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई समेटेर अखबारी स्तम्भ ‘रिडर्स गफ’ सुरु गरेका थिए । स्थानीय पत्रिकामा साप्ताहिक स्तम्भ नै खडा गरेर करिब एक दशक अखबारी लेखन गरे ।
त्यो बेलाको अखबारी लेखनलाई उनले पुस्तकाकारको रुप दिए । खासगरी स्थानीय विषय, विमर्श र मुद्दालाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लेखिएका आलेखको संकलन ‘रिडर्स गफ’ विर्तामोडमा आयोजित समारोहबीच मंगलबार सार्वजनिक गरियो । आख्यानकार पुण्यप्रसाद खरेल र विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईंले संयुक्त रुपमा कृति सार्वजनिक गरेका थिए ।
विश्लेषक प्रसाईंले स्थानीय विषय, विमर्श र मुद्दालाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लेखिएका लेख, निबन्ध र कथाहरुलाई लेखकले पुस्तकका रुपमा संगालेको जनाए । प्रसाईंले भने,‘स्थानीयस्तरका विभिन्न विषयवस्तुहरु समावेश गरिएका कारण कृति पठनीय र रोचक बनेको छ ।’ आख्यानकार खरेलले निबन्धसंग्रहले समाजका विभिन्न आयामलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको जनाए ।
मिडिया रिसर्च सेन्टरका प्रमुख तथा पत्रकार तीर्थ सिग्देलले रिडर्स गफ विषयवस्तु र भाषाका दृष्टिमा सशक्त कृति रहेको दाबी गरे । कृतिका भाषा सम्पादक जनार्दन दाहाल, साहित्यकारहरु कुमार भट्टराई र लीला अनमोलले पनि लेखकको कृतित्व र व्यक्तित्वको चर्चा गरेका थिए ।
प्रकाशित : आश्विन २८, २०७८ १९:१५
‘दसैँ कहिले आउलाजस्तो लाग्थ्यो’ : लोकराज बराल
दसैंमा छोराछोरी पर्खिरहेका आमाहरु
दसैंमा सन्तुलित भोजन कसरी गर्ने?
'बच्चामा धान चोरेर दसैं मनाइन्थ्यो' : पुष्प खड्का
दसैंमा बनाउनुस् यी परिकार